Dhinda muchina vagadziri & vatengesi - China Press muchina Fekitori
Maitiro makuru ekuita: Muviri kuomarara (deformation) 1/6000. Shandisa OMPI pneumatic yakaoma clutch uye brake. Iyo inotsvedza inotora maviri-kona matanhatu-mativi gwara nzira, uye anotsvedza anotungamira anotora "yakakwira-frequency kudzima" uye "njanji yekukuya maitiro", iyo ine yakaderera kusakara, yakakwira kunyatsoita, yakareba chaiyo yekuchengetedza nguva uye yakavandudzwa hupenyu hwevhu. Iyo crankshaft inogadzirwa neakakwira-simba alloy zvinhu 42CrMo, inova 1.3 nguva yakasimba kupfuura makumi mashanu nesimbi uye iine hupenyu hwakareba hwebasa. T ...
Huru maitiro ekuita Shandisa pneumatic wet clutch brake, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa, ruzha rwakaderera, hupenyu hwakareba hwebasa. Inotsvedza inotora ina-kona uye masere-mativi gwara nzira, iyo inogona kutakura yakakura eccentric mutoro kuve nechokwadi chenguva-refu uye yakagadzikana kugadziriswa kwekutsika kwakarurama. Slider gwara njanji inotora "yakakwira-frequency kudzima" uye "njanji kukuya maitiro" ...
Huru kuita kwehunhu: Iyo fuselage ine Ultra-yakakwira kuomarara (deformation) 1/15000, diki deformation, yakareba kunyatso chengeta nguva, yakanyanya kunyatsoita yekutsika zvigadzirwa, diki inoumba rebound, uye inogona kutakura yakakura eccentric mitoro. Shandisa pneumatic wet clutch brake, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa, ruzha rwakaderera, hupenyu hwakareba hwebasa. Inotsvedza inotora ina-kona uye masere-mativi gwara nzira, iyo inogona kutakura hombe eccentric mutoro: kuverengera kwenguva refu uye kugadzikana kugadzirisa kwe stampin ...
Main maitiro ehunhu: Kukwidziridzwa kwakanyanya (deformation) yemuviri uye inotsvedza 1/8000: kushomeka kudiki uye kureba kwakaringana nguva yekuchengetedza. Shandisa pneumatic wet clutch brake (yakasanganiswa mhando): kuchengetedza kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa, pasi ruzha, hupenyu hurefu hwebasa. Inotsvedza inotora ina-kona uye masere-mativi gwara nzira, iyo inogona kutakura yakakura eccentric mutoro kuve nechokwadi chenguva-refu uye yakagadzikana kugadziriswa kwekutsika kwakarurama. Slider gwara njanji inotora "yakakwira-frequency kudzima" iyo ...
Main performance performance: Iyo fuselage chimiro inoumbwa nezvikamu zvitatu (chepamusoro chigaro + chepakati chikuva muviri + hwaro), uye yekusimbisa bhaa inoshandiswa yakasimba kukiya kubatanidza. Kukwirira kuomarara (deformation) 1/9000 ye fuselage uye slide block: diki deformation uye yakareba chaiyo yekuchengetedza nguva. Iyo pneumatic wet clutch brake (yakasanganiswa mhando) inoshandiswa kumadhindaini ari pasi pematani mazana matanhatu, uye yakaoma clutch brake (split type) inoshandiswa kumadhindaini ari pamusoro pematani mazana masere. Iyo yemasiraidhi block inoshandisa makona mana uye eig ...
Main performance performance hunhu imwe: Tora yakasimba-chimiro chemuviri, diki deformation uye yakakwira chaiyo Iyo inotsvedza inotora maviri-kona matanhatu-mativi egwara nzira, uye anotsvedza anotungamira anotora "yakakwira-frequency kudzima" uye "njanji kukuya maitiro": yakaderera kupfeka, yakanyanya kunyatsoita, yakareba chaiyo yekuchengetedza nguva, uye hwakagadziridzwa hupenyu hwevhu. Iyo crankshaft inogadzirwa neakakwira-simba alloy zvinhu 42CrMo, inova 1.3 nguva yakasimba kupfuura makumi mashanu nesimbi uye iine hupenyu hwakareba hwebasa. Mhangura ...